China 2100KG, 2500KG Kudhonza Simba Precast Kongiri Magineti Musangano weSimbi Formwork kana Plywood Mould Kugadzirisa vagadziri uye vanotengesa | Meiko Magnetics
2100KG, 2500KG Kudhonza Simba Precast Kongiri Magineti Musangano weSimbi Formwork kana Plywood Mould Kugadzirisa
2100KG, 2500KG Precast Concrete Magnet ndeye yakajairika simba remagetsi mhando yemagetsi ekuvhara, iyo inokurudzirwa kwazvo kuti ishandiswe kugadzirisa sidemould mune precast kongiri sangweji mapaneru.
2100KG Precast Kongiri Magineti mhando yakaenzana yemagetsi emagetsi ekuvhara magineti, ayo anokurudzirwa kwazvo kuti ishandiswe kugadzirisa sidemould mune precast kongiri sandwich mapaneru. Inogona kukodzera musimbi formwork kana yemapuranga plywood formwork, ine akasiyana maadapter. Iyo pikicha yakaratidzirwa ndeye chigadziro chinobatana nehuni kana plywood padivi-chakuvhuvhu
Mushure bhatani rakadzvanywa, iwo magineti ebhokisi anobata tafura yakasimba. Zviri nyore kuroverera ndiro yesimbi pahwendefa rematanda nezvipikiri.Inogona kumisikidzwa nekungodzvanya pasi bhatani neruoko kana tsoka. Kuti usazvishandise, magineti anosunungurwa zviri nyore nesimbi lever (kudhonza bhatani pa). Mune isingashande nzvimbo, iwo magineti ekuvhara anogona kubviswa zviri nyore kubva patafura fomu. Iwo precast kongiri magineti aigona kushandiswa ega kana kubatana neadpator kugadzirisa mafomu. Kazhinji 2100Kg yakatarisana neuto bhokisi remagineti rakaringana kugadzirwa kwemasirimita 60-90mm. Zvakare, isu tinokwanisa manfuacture mamwe magetsi foce bhokisi magineti, kunyangwe se2500KG, 3000KG mhando sekuda kwako.
Pashure: 1800KG Shuttering Magnets neOne / Off Bhatani yeakagadzirirwa Preform Fomu Rekuvaka System
Zvadaro: Neodymium Disc Magnets, Round Magnet N42, N52 yeElectroni Zvikumbiro
Neodymium Irregular Magnet neBlack Epxoy Coa ...
ABS Rubber Yakavakirwa Round Magnets ePositioning ...
Simbi Lever Bar yekuburitsa Push / Dhonza Bhatani ...